China enokuboliswa ziintsholongwane tableware bagasse yintlama ukutya isikhongozeli uthabathe ibhokisi mveliso kunye nabathengisi | IPHEPHA ELIQINISEKILEYO
Itafile enokuboliswa ziintsholongwane eyilahlekileyo yokutya okususa ibhokisi
Ubume bendalo, ukuchumeka (90days)
Ifriji ekhuselekileyo, i-oveni kunye ne-microwave ekhuselekileyo
Ukumelana namanzi, ukumelana neoyile. anti-emileyo
Yiba negalelo kubomi obuhlaza, kunye neemveliso ezisemgangathweni ophezulu
Inqaku lolwazi: Yintoni icomposte?
Ngokwe-ASTM (American Society for Testing and Materials) imigangatho. Iimveliso ezinokuchuma kufuneka zikwazi ukwahlulahlula zibe yi-carbon dioxide, amanzi kunye ne-biomass. Akufuneki zivelise naziphi na izinto eziyityhefu ngexesha lenkqubo yokwenza umgquba kwaye kufuneka zikwazi ukuxhasa ubomi bezityalo. Kuluhlaza ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni.
Iimveliso zethu zomgubo ezibunjiweyo zombini zekhaya kunye nomzi mveliso oqinisekisiweyo yi-BPI (US), TUV Austria (EU) kunye neABA (Australia / New Zealand). Ukusebenza okuphantsi kwekhabhoni yokupakisha kwintlama kulungele indalo.
Gxila kwiphakeji enobuhlobo kwindalo
Indawo yokubhaka kunye ne-COFFEE CHAIM
Khupha uze uhambise
UKUXHASWA KWETEMPHA EPHAKAMILEYO NENGEZANTSI
Ubume bendalo, ukuhlazeka kwiintsuku ezingama-90
IPHEPHA ELIQINISEKILEYO libonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokupakisha okusingqongileyo ngenkonzo ebalaseleyo kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu
SUSA-NGOKUPHEPHA IZIPHUMO ZOQEQESHO
IMVELISO ENTSHA-Iziqulatho zewonton
Ezi zikhongozeli zimbini zingasetyenziselwa ukubamba iimilo ezahlukeneyo zewonton kunye needombolo. Uyilo lwegumbi lokuyila lilungele iimilo ezahlukeneyo zewonton. Isiciko se-concave sinokufakela ukutya kwisitya kwaye sikugcine kungashukumi ukuze kugcinwe ukutya kufanelekile.
IMVELISO ETHENGISWA KAKHULU
Ihenjisi yeekhonteyina kuluhlu-Ukunikezela kuluhlu lokususa izinto zecontainer ezinobungakanani obithandathu. Uyilo "lokutshixa ibhabhathane" kulula ukuyibamba kwaye uhambe, kwaye ukusebenza kukhuselekile kwizithuthi ezikhuselekileyo, eziya kuthi zihlangabezane ngokufanelekileyo neemfuno zokutya okuya kwiimarike zokutya ezizisiweyo.
YOKUTHUTHA- UKUSUKA YOKUFUNDA isitya
IMVELISO ENTSHA -Izitya ze-Oval: zilungele ukususwa
Esi sikhongozeli semilo embhoxo silungele abathengisi bokutya kunye nabaphakeli abakhonza iindlela zokutya ezinje ngeoodles, ipasta, iicurry, i burritos, iisaladi. Ubungakanani obubini (620ml & 770ml) ziyafumaneka kwiimfuno zakho. Ingena ngokugqibeleleyo kwibhegi esemgangathweni yokuthatha iphepha. Olu luyilo lwemveliso lutsha lubonelela ngeyona nto iphambili kuwo omabini la mazwe: ukusebenziseka lula kunye nokuzinza ekutyeni xa usiya.
EKHAYA & INDAWO YOKUTHENGA NGOKUQHELEKILEYO
EZINYE IPULP IMVELISO YOKUFUNDA
Ukuqhaqhazela ukuPakisha okuPhezulu kwePlp (FHHP) kulungele ukubanda kwisicelo sobushushu obuphezulu. Kungenxa yefomula yethu entsha apho sinokuthi siqonde njenge "PAKI ENYE" yendlela yokutya. Kwakhona kuyanceda ukunciphisa iindleko zokupakisha, ukuphelisa izinto zokwenziwa, ukufezekisa ukusebenza okuphezulu kunye neendleko eziphantsi.
Nangona sele kukho amakhulukhulu eemodeli kwinkampani yethu, sisakwamkela ukuvelisa izinto zetafile yomgubo ngokoyilo lwakho, ubungakanani kunye nelogo.
Masizame ukwenza ilizwe lethu liluhlaza ngakumbi kwaye libengcono.
Egqithileyo Ihowuliseyili Abathengisi China OEM Custom Banokubulawa Logo Ishicilelwe Single Wall engenanto Iphepha Coffee eyo- 8 Oz
Okulandelayo: I-100% yoFakelo oluQhelekileyo lwePhepha eliQinisekileyo lePhepha leNgcaciso ye-Ningbo Fold Fbb C1s yeBhodi yeNdlovu
izitya ze-bagasse isikwere
isitya sokutya se-bagasse
bagasse ngeenxa isitya gumbi
isitya sesaladi se-bagasse
isitya se-bagasse slop
Isikhongozeli sokutya esinobungqina bamanzi
izikhongozeli ukutya bagasse ezilahlwayo
iipleyiti zeswekile ezilahlwayo ezilahlwayo
Isatifikethi se-IOS eTshayina esineSiko soKutya ...
2019 China New Design China C1 Camera Camera lwendlovu Bo ...
Quality High for China Wall Wall Banokubulawa P ...
Ixabiso elifanelekileyo China 210GSM 230GSM 250GSM 270 ...
Umzi mveliso wexabiso eliphantsi wase China Ningbo APP Songa iBhodi / I ...
Factory Elungiselelweyo China Nevia Brand Double Sid ...